Pakistan: Bilaogy Romotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Desambra 2017 7:24 GMT
Tao anatin'ny volana vitsy lasa izay, nanjary “mahaliana” ireo valinteny tao amin'ny bilaogiko manokana raha izay no azo lazaina. Tsy miresaka momba ireo fanehoan-kevitra mahazatra nataon'ireo namana sy ireo bilaogera namana mikasika ny fandinihan'izy ireo ny lahatsoratro farany aho fa momba ny hafatra FANKAHALANA izay nalefa amiko tamin'ny alàlan'ny mailaka. Toa ‘mihevitra’ izy ireo fa ny tsikera feno fanimbazimbana ahy (fa tsy ny asako) dia handresy lahatra ahy tsy hanoratra intsony. Mampihomehy fa mifanohitra amin'izany ny fiantraikany, toy ny mahazatra, manome faharisihana bebe kokoa ho ahy mba hanohy hanoratra hampahatezitra ny mpihaino “tezitra” amiko izany.
Azo takarina ihany koa anefa izany, satria manjary miha tsy mandefitra kokoa amin'ny mpanohitra (rehetra) ny governemanta, toa te mety hampisy fiantraikany amin'ny fandokafana azy ireo tsy am-piheverana mba hananga-tanana hamely ireo manakiana ireo mpitarika tiany indrindra.
Mora adinon'ny ankamaroan'ny olona amin'ny ankapobeny ny tena zava-misy. Eo ny governemanta mba hanompo anao. Fa TSY ny mifamadika amin'izany. Fitiavan-tanindrazana ihany koa ny mampisalasala manampahefana sy manakiana ny governemanta saingy ialako.
Ho an'ny vaovao farany amin'ity herinandro ity, mitondra angona rohy vitsy ho anao aho.
Lightwithin nandoko ny sarin'ny fetiben'ny Basant malaza any Lahore; Suspect Paki indray manasongadina tranga somary mampikorontan-tsaina momba ny tsy fandeferana; Organ Brew mitaraina momba ny votoaty amin'ny teny anglisy tamin'ny gazety mpivoaka isan'andro ao Pakistan; Glasshouse manoratra momba ireo jiolahim-boto amin'ny politika Pakistaney; Ary farany, naneho ny hevitro momba ny drafitra vaovao an'ny Pentagone mba hisarihana ny fiarahamonina iraisam-pirenena aho.
Izany rehetra izany dia amin'ity herinandro ity. Tsy afaka manoratra lahatsoratra hafa ho an'ny blaogiko aho, izay mety hampahatezitra ny mpamaky sasany ka miteraka fitarainana tsy voafehy, nify dilo – ka dia mitandrema!